Zimbazimbain’i Hong Kong Ireo Fesotse Shinoa Rehetra — Ara-bakiteny sy Ankolaka · Global Voices teny Malagasy
Zimbazimbain'i Hong Kong Ireo Fesotse Shinoa Rehetra — Ara-bakiteny sy Ankolaka
Voadika ny 15 Janoary 2016 4:31 GMT
Saripika mampiseho ny lehiben'ny mpitantsoratry ny governemantan'i Hong Kong mitsangana eo ambonin'ny oron'ny fesotse ho toy ny “dingana” iray “hamonoana” ireo fesotse shinoa.
Saripika iray mampiseho an'i Carrie Lam, lehiben'ny mpitantsoratry ny governemantan'i Hong Kong mitsangana eo ambonin'ny oron'ny fesotse shinoa fotsy iray, vita sary eo amin'ny tany ao amin'ny Kianja Amorontsirak'i Taipo, no niparitaka be tato anatin'ny andro vitsivitsy — noho izao antony rehetra tsy misy dikany izao.
Ho an'ireo mpisera amin'ny aterineto, voarakitra an-tsary ny toetsaina manimba nanànan'ireo manampahefana manoloana ilay biby an-dranomasina mampinono, izay biby efa tandindonim-paharingànana noho ireo andianà tetikasam-panjakana fanorenana fotodrafitrasa mitaky fakàna tany midadasika be.
Tao amin'ny pejy Facebook an'ny governemantan'i Hong Kong ireo sary no nalefa voalohany tamin'ny 10 Janoary 2016. Raha eo an-dàlana amin'ny fanorenana seranampiaramanidina iray fahatelo ao afovoan'ny toerana fonenan'ireo fesotse fotsy Shinoa ny governemanta, nadika ho toy ny fandraisana “dingana” “hamonoana” ilay biby mampiavaka kosa ny fihetsik'i Carrie Lam.
Ireto ambany ireto ireo fanehoankevitra tena malaza ao amin'ny pejy Facebook-n'ny governemanta:
Ireo tetikasam-panorenana ataontsika no mamono ireo fesotse fotsy Shinoa, ahoana no ahasahianareo mampiasa azy ireny ho amin'ny fampielezankevitrareo?
Teren-dry zareo hanjavona ny fesotse. Avy eo zareo manao sarinà fesotse tsy tena izy ary milaza ho mientanentana eo amoron'ny ranomasina izay efa tsy misy fesotse intsony. Tena mpihatsaraivelantsihy, diso mahazatra. Afaka ny tsy hisy tahotra ny olona rehefa lany henatra.
Tsy tianao ilay tena izy ka dia vonoinao izy rehetra. Avy eo ianao manitsaka ilay tsy tena izy ka maka sary no sady mihomehy. Karazana toetsaina toy inona re izany e?
[Tamin'ny 1997] Nampiasaina ho toy ny sary famantarana nandritry ny famerenana indray an'i Hong Kong ho an'i Shina ny fesotse Shinoa. Ankehitriny, raha mandeha mankany Tung Chung ianao, feno dokambarotra any mampiasa ny sarin'ireo fesotse fotsy. Mahatsiaro malahelo aho na dia ny mijery ireny saribe ireny fotsiny aza. Tsy raharahain'ny olona ny zon'izy ireny mba ho velona, fa dia mitohy mampiasa azy ireny ho fanaovana dokambarotra, tohizan-dry zareo ny fitrandrahana azy ireny. Amin'izao fotoana izao dia navadika ho sary amin'ny tany sisa ny fesotse fotsy, ary mijoro eo amin'ny oron'izy ireny ireo manampahefana lany henatra ao amin'ny governemanta. Inona no dikan'izany?
Fihenan'ny isan'ny mponina (fesotse)
Efa hatramin'ny taona 1600 tany no nonina tao amin'ny faritra manakaiky ny Pearl River Estuary ireo fesotse fotsy. Tafiditra ho anatin'ny lisitry ny “Sokajy 1 amin'ireo Karazam-biby Tena Arovana ao amin'ny Firenena” izy any amin'ny tanibe Shina ary arovan'ny Fehezandalàna Fiarovana ny Biby Miriaria sy ny Fehezandalàna Fiarovana ireo Karazam-biby sy Zavamaniry Tandindonin-doza ao Hong Kong.
Kanefa, tena efa nihena be ny isan'izy ireo hatramin'ny tapaky ny andian-taona 1990 noho ny filàna tany, ny fahalotoan'ny rano ary ny fitomboana mavesatry ny fivezivezena an-dranomasina. Ny Iisitra Mena Avy Amin'ny IUCN momba ireo Kazarana Tandindonin-doza dia mametraka ny fesotse ho toy ny “tandindonin-doza mananontanona.”
Araka ny fikambanana Mpiaro ny Fesotse ao Hong Kong, 61 sisa ireo fesotse hita teny amorontsirak'i Hong Kong tamin'ny 2014, raha tamin'ny 2003 nisy teo amin'ny 158 teo no voaisa. Inoana fa mifandray amin'ny asa fanorenana ilay tetezana lavabe Kong-Zhuhai-Macau mirefy 42 kilaometatra ilay fihenana.
Raha ankatoavina ilay tetikasa hanorenana seranam-piaramanidina iraisampirenena fahatelo ao Hong Kong, dia hahita ny toerana fonenan-dry zareo efa nihena ho vao mainka hihakely ireo fesotse fotsy. Nanipika tao anatin'ny tatitra nataony momba ny fiantraikan'io amin'ny tontolo iainana ny Hong Kong World Wild Fund, mpiambina iray hafa ny tontolo iainana :
Nandritry ny 20 taona lasa, 2.000 hektara raha kely indrindra tamin'ny toerana fonenan'ireo fesotse tao Hong Kong fotsiny no simba na potika vokatry ny fandoarana ny tany, ny varotra gaboraraka sy ny asa fanotorana ny tany eny amorontsiraka. Ny asa fanorenana mifandray amin'ilay seranam-piaramanidina fahatelo dia hilàna velarana 650 hektara eny ambony ranomasina. Mandritry ny dingana fanorenana dia hisy ihany koa 981 hektara tena ho voadona mafy amin'izany.
Ao anatin'ny faritra telo tena fonenan'ireo fesotse fotsy Shinoa mihitsy no misy ny toerana nalefa ho sosokevitra hanorenana ilay seranam-piaramanidina fahatelo […] Voalohany indrindra dia hametraka sakana hita maso ao anaty ranomasina ilay seranam-piaramanidina vaovao, hanelingelina asan'ireo fesotse sy ny fivezivezena eo anelanelan'ireto toeram-ponenana manan-danja ireto.
Tsy ijereny mihitsy ny amin'ireo ahiahy rehetra momba ny tontolo iainana, tapakevitra ny hanorina ilay seranam-piaramanidina mitentina dolara an-davitrisa maro ireo manampahefana momba ny seranam-piaramanidina ao anatin'ny governemanta, mba hitazonana ny fahafaha-mifaninan'ny tanànany ao anatin'ny faritra Pearl River, na dia efa sempotra aza ny habakabak'i Hong Kong ary tsy misy fifanarahana natao momba ny fifamoivoizana an-habakabaka mba hanomezana faritra habakabaka misimisy kokoa ho an'ilay tanàna.
Tsy ny fesotse fotsy Shinoa ihany no ho faty amin'ilay dingana ataon'ny governemanta ao Hong Kong, fa hatramin'ny fitokisan'ny vahoaka.